Boy , they were pret - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: boy , they were pretty mad ! (Engels - Burmees)
Unfortunately, they were people just like us.
အဝေးတစ်နေရာမှ သူတို့ ရပ်ကြည့်နေမိ၏။
ထိုသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ ငွေပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။
လှေမှဆင်းသောအခါ လူများတို့သည် မျက်နှာတော်ကို ချက်ခြင်းမှတ်မိလျှင်၊
ထိုမှတပါး၊ အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည် အင်္ဂါတခုတည်းဖြစ်လျှင် ကိုယ်သည်အဘယ်မှာ ရှိလိမ့်မည်နည်း။
ကမ်းတဘက်သို့ကူးလျှင် ဂင်္နေသရက်နယ်သို့ ရောက်ကြ၏။
ခဲပြားပေါ်မှာကညစ်နှင့်အက္ခရာတင်လျက်၊ ကျောက်စာထိုး လျက်မြဲပါစေသော။
They were arrested for the simple act of public campaigning.
၎င်းဥပဒေသည် မဲပေးမည့်အချိန်မတိုင်မီ ရက် ၉၀ အတွင်း ငွေကြေး၊
ထိုသို့သင်းဖွဲ့သော သူတို့သည် လေးကျိပ်မက ရှိကြ၏။
They were effected badly because of today's rain.
ခုတလောဖြစ်တဲ့ မိုးကြီးမှုတွေကြောင့် သူတို့တွေ ဒုက္ခခံနေရပါတယ်။
တပည့်တော်တို့သည် အလွန်ကြောက်သောကြောင့် ပေတရုသည် ယောင်ယမ်း၍ ထိုသို့လျှောက် သတည်း။
ဤသူတို့သည် မိန်းမောတွေဝေလျက်ပြန်၍ မပြောဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ နေကြ၏။
ပညာကိုရ၍ ဤအမှုကို နားလည်ကြပါစေ သော။ နောက်ဆုံးကာလ၌ အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို ဆင်ခြင်ကြပါစေသောဟု မိန့်တော်မူ၏။
nasasabik lang ako sayo (Tagalog>Engels)iyarkaiyai kappom (Engels>Tamil)match (Zweeds>Esperanto)prarthana nu mahatva essay (Hindi>Gujarati)fordelingspolitik (Deens>Engels)hindi kasi ako sanay mag isa (Tagalog>Engels)prästkläderna (Zweeds>Xhosa)玩你的游戏 (Chinees (Vereenvoudigd)>Italiaans)subisce lo stesso effetto (Italiaans>Engels)warning (Hongaars>Italiaans)pau (Deens>Estisch)karu pai (Engels>Tamil)xx ভিডিও সানিলিয়ন (Bengali>Engels)kasingkahulugan ng hinamak (Tagalog>Engels)schändlich (Duits>Vietnamees)versareafilo (Italiaans>Engels)d'estate non vale (Italiaans>Engels)ebiatar (Italiaans>Cebuano)beihilfebetrags (Duits>Engels)wo wohnst du (Duits>Albanian)fantasticato (Italiaans>Sloveens)issuer (Engels>Grieks)बीपी फिल्म सेक्स (Hindi>Engels)gesigte (Afrikaans>Deens)memyalung ku (Engels>Tagalog)